သြစတြေးလျ Shepherd အပြာရောင်ဟီလာသည်သင့်အတွက်ရောလား။ - Breeds
The Australian Shepherd အပြာရောင်ဟီလာရောစပ်ပါ နာမည်များစွာဖြင့်ဖော်ပြသည် - Australian Blue Heeler, Texas Heeler, Australian Heeler နှင့် Queensland Heeler Australian Shepherd တို့ပါဝင်သည် အနည်းငယ်အမည်ပေးရန်။
အဘယ်နှစ်ခုမျိုးတက္ကဆက် Heeler စေ?
Texas Heeler ဆိုတာဘာလဲ?
စိတ်ထား: တက္ကဆက် Heeler ကမိသားစုခွေးကောင်းလား။
သင့်ရဲ့ Aussie Shepherd Blue Heeler ရောနှောမှုကိုဂရုစိုက်ခြင်း
Blue Heeler Australia Australia သိုးထိန်းများသည်ကျန်းမာပါသလား။
ရောင်းရန် Texas Heeler ခွေးပေါက်စများရှာဖွေခြင်း
သင်ဤသည်အခြား herding ရောနှောပေါင်းစပ်ချစ်ကြလိမ့်မယ်
သြစတြေးလျ Shepherd Blue Heeler ရောနှောမှုသည်သင်၏အထုပ်ထဲ၌ပါ ၀ င်မလား။
၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်တီထွင်ခဲ့သော Texas Heelers များသည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်ရပ်ကြီး။ ဤအပြန်အလှန်ဖောက်ခွဲခြင်းကိုအများအားဖြင့်နွားမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များကိုကူညီပေးသည့်ပေါင်ကိုချေးငှားသည်ကိုတွေ့ရခြင်းမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
တစ်မျိုးစပ်အနေဖြင့်, Aussie Shepherd အပြာရောင်ဆေးကြောခြင်း heeler ရောနှောမှုကို American Kennel Club (AKC) မှအသိအမှတ်မပြုပါ။ The အမေရိက၏ခွေး Registry (DRA) နှင့် အမေရိကန်ခွေးတစ်ကောင် Hybrid ကလပ် (ACHC) နှစ် ဦး စလုံးသို့သော်ဖောက်အသိအမှတ်ပြုရန်။
ဒီဟိုက်ဘရစ်ကိုဘာတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုအမှန်တကယ်နားလည်ဖို့အတွက်၊ သူ့ရဲ့မျိုးရိုးတွေကိုသိဖို့လိုတယ်။ သြစတြေးလျသိုးထိန်းနှင့်Cစတြေးလျကျွဲနွားခွေးတို့ကို ပို၍ နက်ရှိုင်းစွာကြည့်ကြပါစို့။
သြစတြေးလျသိုးထိန်းများ သို့မဟုတ် သြစတြေးလျ , ဖြစ်ကြသည် သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်စွမ်းအတွက်လူသိများ ။ သူတို့၏အမြစ်များသည်ဥရောပ၏ Pyrenees တောင်တန်းများအထိကျယ်ပြန့်သည်။ သူတို့၏အစောဆုံးဘိုးဘေးများသည်နွားမွေးမြူရေးခြံများဖြစ်သည်။
၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်များရောက်သော်ခေတ်သစ်သြစတြေးလျသိုးထိန်းများသည်သြစတြေးလျအစွန်အဖျားဒေသရှိ (စာသားအရ) သမုဒ္ဒရာများကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုနာမည်ပေးခဲ့သည်။
သငျသညျဆဲသြစတြေးလျသိုးထိန်း America ရဲ့လယ်ယာမြေအလုပ်လုပ်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ အားကစားနှင့်မောင်းနှင်မှုသည်သူတို့ကိုသွက်လက်ခြင်းနှင့်နာခံခြင်းစမ်းသပ်မှုများအတွက်အလွန်ကောင်းသောအရည်အချင်းများကိုဖြစ်စေသည် ။
Cစတြေးလျကျွဲနွားခွေး AKA အပြာရောင်ဟီလာနှင့်တွေ့ဆုံပါ
အမည်ပြောင်များရှုပ်ထွေးခြင်းကိုမခံပါနှင့်။ The သြစတြေးလျကျွဲနွားခွေး နှင့်အပြာရောင် Heeler အတူတူဖောက်များမှာ! ခွေးတစ်ကောင်အဖြစ်ရည်ညွှန်းထားသောဤခွေးတစ်ကောင်ကိုသင်ကြားနိုင်သည် ကွင်းစလန်ဟီလာ သို့မဟုတ် Australian Heeler ။
သြစတြေးလျကျွဲနွားခွေးများသည် Aussie Shepherd ကဲ့သို့သော Land Down Under တွင်သန့်စင်ခံခဲ့ရသည်။ ဒီမှာ သူတို့ရဲ့ဆည်းကပ်ခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်များအတွက်ဂုဏ်သတင်းရရှိခဲ့သည် ။
သူတို့ရဲ့ခွေးတစ်ကောင် counterpart မတူဘဲ, သို့သော်, အပြာရောင် Heeler ရဲ့မိသားစုသစ်ပင်အနည်းငယ်ပိုပြီးအကိုင်းအခက်ရှိပါတယ်။
အပြာရောင်ဖနောင့်သည်မျိုးဆက်ဖြစ်သည် Smithfield , ဗြိတိန် herding ဖောက်သြစတြေးလျမှတင်သွင်း။
Smithfields ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရုန်းကန်သောအခါသူတို့ကဲ့သို့ပိုပြီးကြမ်းတမ်းဝတ်ရည်နှင့်အတူရောနှောခဲ့သည် စကော့တလန် Highland Collies နှင့် Dingoes ။
ဒါပေမယ့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကဒီမှာရပ်တန့်မထားဘူး! Dalmatians နှင့် ကွမ်းသီး ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့သြစတြေးလျကျွဲနွားခွေးပေးခြင်း, ရောနှောသို့ပစ်ချခံခဲ့ရသည်။
သငျသညျမှန်းဆခဲ့ကြပေမည်သကဲ့သို့, သြစတြေးလျအပြာရောင် heeler ရဲ့အသွင်အပြင်ဝေးစံချိန်စံညွှန်းများကနေဖြစ်ပါတယ်။
Ozzy နှင့် Phinea တို့၏တက္ကဆက်ပြည်နယ် Heelers နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း - ပုံရိပ်ရင်း
တူညီတဲ့အမှိုက်သရိုက်များမှပင်တူသောတက္ကဆက် Heelers ကိုရှာတွေ့ခြင်းသည်ကြိုကြားကြိုသည်။
သူတို့ကမကြာခဏသြစတြေးလျကျွဲနွားရဲ့ဝါကြွား ကြွက်သားဘောင် နားရွက်များနှင့်အနက်ရောင်နှာခေါင်းပေါက်များနှင့်အတူတက်။
သူတို့၏မျက်လုံးများသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပြီးတောက်ပသော၊ မှောင်မိုက်သောအညိုရောင်သို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးရောစပ်နိုင်သည်။
အချို့မှာ Aussies လိုမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်ခြားကွဲပြားနိုင်ပါတယ် heterochromia ။
Blue Heeler Australian Shepherd ရောစပ်မှုသည် များသောအားဖြင့် bobtail နှင့်မွေးဖွားသည် ဒါပေမယ့်သူတို့မှာအမြီးရှည်နိုင်တယ်။
သငျသညျရှိသည်သောခွေးသိကြသလား bobbed အမြီးအလုပ်လုပ်ဖောက်အဖြစ်၎င်းတို့၏အမွေအနှစ်၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်သည် ?
သြစတြေးလျ Shepherd Blue Heeler ရောနှောမှုသည်မည်မျှကြီးမားမည်နည်း။
ရပ်နေ 17 မှ 22 လက်မ (၄၃ မှ ၅၆ စင်တီမီတာ) နှင့်အလေးချိန်ရှိသည် 45 မှ 55 ပေါင် (၂၀ မှ ၂၅ ကီလိုဂရမ်) အပြည့်အ ၀ စိုက်ပျိုးပြီးသည့်အခါသြစတြေးလျအပြာရောင်ဟီလာသည်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရွယ်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးတက္ကဆက် Heelers သည်အနည်းငယ်သေးငယ်နိုင်သော်လည်းလိင်နှစ်ခုကြားသိသိသာသာအရွယ်အစားကွာခြားမှုမရှိပါ။
တစ် ဦး နှင့်အတူတက္ကဆက် Heelers သေးငယ်သောသြစတြေးလျသိုးထိန်း မိဘသို့သော်မကြာခဏ daintier တည်ဆောက်ရှိသည်။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒါသူတို့ရဲ့သမိုင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ သူတို့ဟာမွေးမြူရေးခြံတွေခြံတွေလိုကျေးလက်ဒေသမှာနေသင့်တယ် ။
Blue Heeler Australian Shepherd ရောစပ်ထားသောအင်္ကျီအမျိုးအစားများနှင့်အရောင်များ
သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်တစ် ဦး ရှိသည် အလတ်စား - နှစ်ဆအင်္ကျီကိုမှတိုတောင်း - ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့်အပေါ်အင်္ကျီနှင့်သိပ်သည်းသော undercoat ။
အချို့သောAustralianစတြေးလျသိုးထိန်း - ကျွဲနွားခုံးများ၌ချောမွေ့။ ဖြောင့်ဖြောင့်သို့မဟုတ်လှပသောဆံပင်များရှိသော်လည်းအခြားသူများသည်တောင့်တင်းသည့်အမွေးများရှိသည်။
ဤသည် crossbreed ၏ပေါင်းစပ်လာပါတယ် အနက်၊ အဖြူ၊ အညို၊ tan၊ မီးခိုးရောင်၊ အပြာ merle နှင့်အနီရောင် merle တို့ဖြစ်သည် ။
အဆိုပါ Queensland ပြည်နယ် Heeler Aussie Shepherd ရောနှောနှလုံးမောဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိအရိုးတိုင်းသည်အလုပ်ကြိုးစားခြင်းနှင့်ထိန်းကျောင်းခြင်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
Roscoe နှင့်တွေ့ဆုံ၊ ပုံရိပ်ရင်း
ထို့ကြောင့်စွမ်းအင်ပြည့်ဝ။ အသိဉာဏ်ရှိသောခွေးကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့လုပ်တာ မိသားစုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပေါင်းအဘော် အဘယ်သူသည်အိမ်ပြင်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်တက်ကြွဖြစ်ခြင်း။
မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်, တက္ကဆက် Heelers ဖြစ်ကြသည် သဘာဝအကာအကွယ် ။ သူတို့ကိုသူစိမ်းများသို့မဟုတ်မသိသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အလျင်အမြန်မိတ်ဆွေဖွဲ့သည်ကိုသင်ပုံမှန်မတွေ့ရပါ။
ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ပုံမှန်လူမှုရေးဖြစ်စဉ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်၏သြစတြေးလျ Blue Heeler သည်အခြားလူများ၊ ခွေးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာလိုအပ်သည်။
သတင်းကောင်းမှာ Aussie Shepherd အပြာရောင်ဟီလာရောစပ်ခြင်းဖြစ်သည် ခဲအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲဟောင် ။ သူတို့ကအစသူတို့ရဲ့ pack ကိုအတူမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖော်ရွေပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အကြား သစ္စာရှိမှုနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ကို ဤအပြန်အလှန်ဖောက်ခြင်းသည်မိသားစုတစ်စုလုံးနှင့်ပင် kiddos ကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်သည်။
သြစတြေးလျ Heeler ၏ထိန်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာဗီဇသည်ကောင်းချီးတစ်ခုနှင့်ကျိန်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ဒီ pup ကိုတိရိစ္ဆာန်သေးငယ်တွေဆီမပို့ဖို့သတိထားပါ။ The လိုက်ရန်နှင့်နွားအုပ်ဖို့သွေးဆောင်မှု အရမ်းလွန်းတယ်
သငျသညျဤတူညီသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကလေးငယ်များနှင့်အတူ playtime ကြီးကြပ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ Fido ကသိုးတွေအတွက်အမှားလုပ်မိနိုင်တယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, တက္ကဆက် Heelers အပြုသဘောခေါင်းဆောင်မှုကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်ကြသည်။ သူတို့သည်စိတ်ကျေနပ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လျင်မြန်စွာသင်ယူကြသည် ။ အတွေ့အကြုံရှိပိုင်ရှင်များကဒီစပ်ရဲ့ပြောင်းလဲနေသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုလမ်းပြမဆိုအခက်အခဲရှိသင့်သည်။
ဒီခွေးအဖေတစ် ဦး ပေါင်းစပ်ဘယ်လိုသတိပြုပါ ကလစ် , ရယူထားသော နှင့်ကောင်းစွာပြုမိအလုပ်တစ်ခုသည်သူ၏တက္ကဆက် Heeler pup ဆုချီးမြှင့်ဖို့ချီးမွမ်းခြင်း။ ၁၅ ပတ်ကြာမဂ္ဂီသည်ဤဗီဒီယိုတွင်သူ၏လှည့်ကွက်များကိုပြသရန်ပျော်မွေ့ပါ။
သင်၏ Queensland Heeler Aussie အရောအနှောသည်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်းထက်ပိုနှစ်သက်ပါလိမ့်မည်။ အမှီအခိုကင်း။ လိမ္မာပါးနပ်သောဤခွေးများသည်သူတို့အပြောင်းအရွေ့တွင်အလုပ်လုပ်သောအခါအပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်သည်။
သင်၏ Texas Heeler ကိုမည်မျှမကြာခဏသရုပ်ဆောင်သင့်သနည်း။ ပြီးတော့ဘယ်လောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုသလဲ။ အဖြေများကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။
သင်၏ Texas Heeler ကိုမည်မျှမကြာခဏသရုပ်ဆောင်သင့်သနည်း။
သငျသညျအံ့ were ခဲ့ကြလျှင်, သြစတြေးလျ Shepherd အပြာရောင် Heeler ရောနှောသွန်းလောင်းဘူး။ သူတို့ရဲ့အပြည့်အဝအင်္ကျီနှင့်အတူ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသွန်းလောင်း ဤခွေးများသည်ခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ရနိုင်သည့် hypoallergenic မဟုတ်ပါ။
သို့တိုင်, ဤ crossbreed ကြီးမားကျယ်ပြсырткыမလိုအပ်ပါဘူး။ တစ်ပါတ်2မှ3ကြိမ် များသောအားဖြင့်လုံလောက်သည်၊ သို့သော်သင်ကအမြဲတမ်းသူတို့ကိုမကြာခဏဆေးကြောနိုင်သည်၊
သင်၏သြစတြေးလျဟီလာကိုဖြည့်စွက်ရန်ခြုံငုံသည့်အချိန်တွင် (pun Pun ရည်ရွယ်ထားခြင်းမရှိစေရန်) အနည်းငယ်ဆံပင်ညှပ်ပေးနိုင်သည်။ သူတို့ကိုမရိတ်ပဲ!
သင်ကအခြားအရောအနှောများထက် ပို၍ မကြာခဏရေချိုးရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ သင်မလိုချင်ပါ ခေါင်းလျှော်ရည် သို့သော်ရေချိုးတိုင်းသူတို့နှင့်အတူ။
scrub-down တစ်ခုလုံးအတွက် suds များကိုသိမ်းပါ အများဆုံး6မှ 8 ရက်သတ္တပတ် ။ တစ်ချိန်တည်းတွင်အမှိုက်သို့မဟုတ်ရွှံ့များကိုရေပိုက်ရန်ရေရေချိုးရန်အားကိုးပါ။
သငျသညျ Fido ရဲ့နားရွက်ခြစ်နေစဉ်, စိတ်တိုခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါကူးစက်မှု၏လက္ခဏာများအဘို့ထိုသူတို့စစ်ဆေးပါ။ သူတို့ကိုသန့်ရှင်းသောအ ၀ တ်ဖြင့်သုတ်ပါ သုတ် မည်သည့်အပျက်အစီးများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်။
သင်၏သြစတြေးလျအပြာရောင်ဟီလာ၏အလှအပဆိုင်ရာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုဖြည့်ရန်၊ သွား တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ် သူတို့၏လက်သည်းများကိုချုံ့ပါ တစ်လမှ 1 ကြိမ်မှ2ကြိမ် ။
Australian Heelers သည်မည်မျှလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလဲ။
သင့်ရဲ့ Texas Heeler ကသူတို့လမ်းကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအပြင်ထွက်နေမှနေဝင်ချိန်အထိသူတို့ရဲ့ခြေလက်တွေကိုဆန့်ထုတ်ပြီးအပြင်မှာရှိနေလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်အလွန်အကျွံပုံပေါက်ပါကအစီအစဉ်ဆွဲပါ တစ်ရက်လျှင်အနည်းဆုံး ၆၀ မှ ၉၀ မိနစ် တစ်ပတ်ကို ၁၄ မိုင်၊
ဒီဟာကိုသတိရပါ အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်းလင်းသောနိမ့်ဆုံး ဒီစပ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်အမြဲတမ်းပိုကောင်းသည်။
သင်တက်နိုင်လျှင်အံ့သြ? Aussie အပြာရောင် Heelers များသည်လေ့ကျင့်ခန်းကိုတိုက်ရိုက်ပေးရန်လူများကိုမလိုအပ်ပါ။ သူတို့ကသင့်ကိုအခွင့်အလမ်းပေးဖို့ပဲလိုတယ်။
သင့်အိမ်နောက်ဖေးတွင်ကျပန်းကျက်စားနေသောတိရစ္ဆာန်များရှိပါသလား။ အိမ်ပတ်ပတ်လည်တွင်ကူညီရန်သင်၏ Aussie သိုးထိန်းအပြာရောင်ဟီလာကိုသင်ပေးပါ။
၎င်းသည်သင်နေထိုင်ရာရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါကသင်၏ခွေးကလေးကိုလုံခြုံသောခြံဝင်းထဲတွင်လှည့ ်၍ ပြေးလိုက်သည်ကိုကြည့်ပါ။ ဒီ pooch အမှန်တကယ်ငြီးငွေ့ဖို့ ဦး နှောက်ဂိမ်းများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများတွင်ထည့်ပါ။
သင်ပင်သူ့ကိုပေးနိုင်သည် တိရစ္ဆာန်လိုအရုပ် လိုက်ရန်သူ၏လိုအပ်ချက်ကျေနပ်အောင်။
Queensland Heeler Australian Shepherd ရောနှောမှုသည်သူတို့၏ထူးခြားချက်များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်အသစ်အဆန်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့၏လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်အတွေ့အကြုံအသစ်များပေးရန်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားပါ။
Texas Heelers သည်အပူလွန်ကဲခြင်းအပါအဝင်ရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုသည်းခံနိုင်သည်။ အဲဒါကမင်းအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ရွေးချယ်စရာများ, သူငယ်ချင်း
ဤစပ်သည်ခွေးတစ်ကောင်အားကစား၊ သွက်လက်၊ flyball နှင့်ပြိုင်ပွဲကဲ့သို့အချိန်ယူရသည်။ သင့်အနီးရှိ doggie သွက်လက်သင်ကြားမှုမရှိပါ? ရေချိုများစွာကိုထုပ်ပြီး Fido ကိုတိုးမြှင့်ပါ။
Australian Heelers များသည်ရေငုပ်သမားများဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှဒီကြမ်းတမ်းဖောက်ဘို့ Off- ကန့်သတ်သည်!
အစားအသောက်နှင့်အစာကျွေးခြင်း - kibble သည်မည်မျှလွန်းသနည်း။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်, Aussie အပြာရောင် Heelers လိုအပ်ပါတယ် 2.5 ခွက်မှ3ခွက် တစ်နေ့လျှင်အစားအစာ ၂ ခုမှ ၃ ခုအထိဖြန့်ဝေသည်။ သင့်ရဲ့ကလေးကပိုတက်ကြွတယ်၊ တည်ဆောက်မှုပိုကြီးလာရင်ဒီပမာဏကိုတိုးဖို့လိုလိမ့်မယ်။
Texas Heelers များသည်အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်အကြီးစားမျိုးဆက်များအတွက်ရေးဆွဲထားသောခွေးစာကိုစားနိုင်သည်။ သင်သည်သူတို့၏ kibble ရှိပါတယ်သေချာဖြစ်ချင်ပါလိမ့်မယ် အနည်းဆုံး 20% ပရိုတိန်း ။
Cattle Dog Australian Shepherd အရောအနှောများသည်ဇီဇာကြောင်သောအစားအစာများဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ သင်သည်သင်၏ pup ၏အရသာဘူးသီးနှင့်ကိုက်ညီသည့်အာဟာရပြည့်ဝသောအမှတ်တံဆိပ်ကိုမတွေ့မချင်းအစာအနည်းငယ်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားပါ။
Australian Blue Heelers ကိုပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများဖြင့်မွေးဖွားခဲသည်။ မှန်ကန်သောစောင့်ရှောက်မှုဖြင့်သူတို့၏သက်တမ်းသည်ကြာရှည်နိုင်သည် 12 မှ 16 နှစ် !
ဤသည်သော်လည်း, တက္ကဆက် Heelers ကျန်းမာရေးအခြေအနေများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လို့မရပါဘူး။ သင်၏ခွေးတစ်ကောင်သည်အဆက်မပြတ်နွားများကိုကျက်စားပါကသူသည် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည် တံတောင်ဆစ်နှင့်တင်ပါးဆုံရိုး dysplasia ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်မျက်ရည်ကြောင့်။
မျက်လုံးအခြေအနေများ Progressive Retinal Atrophy (PRA)၊ Collie Eye Anomaly (CEA) နှင့်မျက်စိအတွင်းတိမ်ကဲ့သို့သင်၏ခွေးအသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သည်။
ထို့အပြင် Aussie အပြာရောင်ဟီလာကိုသူတို့၏တူညီသောအင်္ကျီကိုပေးသောမျိုးရိုးဗီဇများသည်လည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် နားပင်း ။ ၎င်းသည်အာမခံချက်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသတိပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်၏ Blue Heeler Australian Shepherd ရောနှောထားသည့်အခြားကျန်းမာရေးပြproblemsနာများလည်းရှိသည် အရက် , osteochondritis dissecans, ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့် Collie နှာခေါင်းသို့မဟုတ် ဒစ္စကို Lupus Erythematosus (အဆိုအရ)
တွေ့ဆုံ Luna, တက္ကဆက် Heeler ခွေးကလေး - ပုံရိပ်ရင်း
Australian Shepherd & Blue Heeler ရောစပ်မှုအများစုသည်များသောအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်များတတ်သည် $ 800 နှင့်အထက် ။ ရှားရှားပါးပါးဒီဇိုင်းဆွဲသည့်ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည့်အပြင်လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအတွက်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောစပ်ဖြစ်ခြင်းကစျေးနှုန်းကိုပိုမိုမြင့်မားစေနိုင်သည်။
သငျသညျမျိုးဆက်များနှင့်အတူစျေးဝယ်သို့မဟုတ်တက္ကဆက် Heeler ချမှတ်အကြားကိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ရွေးစရာနှစ်ခုလုံးကိုစူးစမ်းလေ့လာကြပါစို့။
Australian Shepherd အပြာရောင်ဟီလာသည်မျိုးဆက်များကိုရောနှောထားသည်
ဤသည်ရောနှောဖောက်တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက်အတော်လေးရေပန်းစားသည်, သင်မူကား Lone စတားပြည်နယ်အပြင်ဘက်တွင်တက္ကဆက် Heeler ခွေးများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ခရီးသွားဖို့လိုကောင်းလိုမယ်၊ သင်တစ် ဦး အိမ်အပေါ် skimp ချင်ကြပါဘူး အလည်အပတ်လာရောက်တွေ့ဆုံသည် နှင့်အတူ။ ဤအတွက်သင်၏ဝယ်ယူချိန်နှင့်ဘတ်ဂျက်အကောင့်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောမျိုးဆက်များကိုတောင်းရန်ထိုက်တန်သည် ကျန်းမာရေးအာမခံချက် မင်းလမ်းမရောက်ခင်မှာ သငျသညျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်သင်အဖြစ်ကောင်းစွာအစောပိုင်းကတောင်းလိမ့်မယ်။
မျိုးဆက်တစ်မျိုးသည်၎င်းကိုမပေးနိုင်ပါကမပေးနိုင်ပါကသင်၏ကြိုးပမ်းမှုများကို ပို၍ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုသို့ပြန်ပို့နိုင်သည်။
CrossBow ကျွဲနွား (Jacksonville, FL)
မြို့ & တိုင်းပြည်တက္ကဆက် Heelers (ဆီနီကာ၊ မင်)
ALT တက္ကဆက် Heeler Pups (Dalhart, TX)
သြစတေးလျ - သြစတြေးလျကျွဲနွားခွေးကယ်ဆယ်
ကယ်ဆယ်ရေး ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကိုရွေးချယ်သောအခါ၊ မျိုးပွားသူမှတစ်ဆင့်သင်ဝယ်ယူသည့်နည်းအတိုင်းဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်ဆံပါ။
လူကိုယ်တိုင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့သို့လာရောက်ပါ။ သငျသညျအဟောင်းခွေးမွေးစားအထူးသဖြင့်လျှင်, သင်ပထမ ဦး ဆုံးသူတို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများစိတ်ရှုပ်ထွေးနေပါကသင်ဘယ်လိုနောက်ထပ်သိနိုင်မည်နည်း
အမိုးအကာသည်ကန ဦး ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနများနှင့်ကာကွယ်ဆေးများကိုလည်းကိုင်တွယ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ သင်သည်သင်၏ကယ်ဆယ်ရေး pup ၏သမိုင်းနှင့်ပတ်သက်။ အရာအားလုံးကိုသိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ဒီအပိုစောင့်ရှောက်မှုနည်းနည်းသူတို့ကိုကျန်းမာ - ပညာရှိတစ် ဦး ခြေထောက်တက်ပေးသည်။
တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကျွဲနွားခွေးကယ်ဆယ်ရေး (Fort Worth, TX)
သြစတြေးလျကျွဲနွားခွေးကယ်ဆယ်ရေးအသင်း (Garden City, NY)
WY, Inc ၏ HeRD (Sheridan, WY)
ပြောပါ စိန့်လူးဝစ် (Troy, IL)
ဤမျှလောက်များစွာသောအထင်ကြီးလောက်သောဒီဇိုင်နာသည်ထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်၎င်းကိုရွေးချယ်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးလျှင်ဤနေရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်နောက်ထပ် hybrids များလည်းရှိသည်။
Meet Honey, Sheစတြေးလျသိုးထိန်းဓာတ်ခွဲခန်းမှရော ပုံရိပ်ရင်း
။ Multi- အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မိသားစုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ပေါင်းစပ်ပြီး Labrador Retriever ရဲ့ အဆိုပါ Aussie ရဲ့ go-getter သဘောထားနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေ, ဒီစပ်ပျော်စရာများအတွက်စာရွက်ပါ!
Australian Shepherd Poodle ရောစပ်ခြင်း
သြစတြေးလျ Shepherd Poodle ရောစပ်ပါ
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်အပေါ်အထိခိုက်မခံ? The နင် သင်လိုအပ်တာတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ နှင့် Poodle ရဲ့ hypoallergenic ဗီဇ, Aussiedoodles အလွန်ကြီးစွာသောနိမ့်သွန်းလောင်းအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ သင်ပင်ရနိုင် အသေးစားသြစတြေးလျ သေးငယ်ဝတ်ရည်သင့်ရဲ့ဖန်စီကိုက်ညီလျှင်။
သြစတြေးလျကျွဲနွားခွေး Corgi ရောနှော
Mochi နှင့်Cစတြေးလျ Cattle Dog Corgi ရောနှောခြင်း ပုံရိပ်ရင်း
အဖြစ်လူသိများ ကောင်းဘွိုင် Corgi , ဒီ crossbreed ဘက်မှာကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော - နှင့် spunky ဖြစ်ပါတယ်။ Heeler merle သည်ထူးခြားသောလက္ခဏာကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ Corgi ခြေထောက်များ။ ကြောင်း Corgi ရဲ့ spunk နှင့်အတူစုံတွဲ, သင်ကြီးမားတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူအိတ်ကပ်အရွယ် pooch ရရှိပါသည်!
သြစတြေးလျကျွဲနွားခွေး Border Collie ရောနှောပါ
Meet Dax၊ Cစတြေးလျကျွဲနွားခွေး Border Collie ရောနှောမှု - ပုံရိပ်ရင်း
Border Collies ကမ္ဘာပေါ်တွင်အထူးချွန်ဆုံးမျိုးစိတ်ဟုအခေါ်ခံရသည်။ သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပေါင်းအပြာရောင် Heeler ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု? သင်ကထိပ်တန်းအဆင့်မြင့်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူထိပ်တန်းကျက်စားသောခွေးတစ်ကောင်ကိုစျေးကွက်ထဲရောက်နေလျှင်၊ Border Heeler ။
Australian Shepherd German Shepherd ရောစပ်ခြင်း
သြစတြေးလျားသိုးထိန်းဂျာမန်သိုးမွှေးရောစပ်သူ Mila နှင့်တွေ့ဆုံပါ ပုံရိပ်ရင်း
အဖြစ်လူသိများ ဂျာမန်သြစတြေးလျသိုးထိန်း သို့မဟုတ် ဂျာမန်သြစတေး , ဒီ crossbreed ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောသေးအလွန်စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အားကိုးနိုင်သည် ဂျာမန်သိုးထိန်းသြစတြေးလျရောနှော မည်သည့်အလုပ်, အလုပ်, ဒါမှမဟုတ်အားကစားပေါ်မှာ။
Meet Bomber၊ Sheစတြေးလျသိုးထိန်းအပြာရောင်ဟီလာရောစပ်မှု - ပုံရိပ်ရင်း
တက္ကဆက်ပြည်နယ် Heelers ဖြစ်ကြသည် quintessential အလုပ်လုပ်ခွေး ။ ဒီမတူကွဲပြားပြီးကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့ဒီပေါင်းစပ်မွေးမြူခြင်းကတိရစ္ဆာန်များကိုလွယ်ကူစွာကြည့်ရှုစေသည်။
ဤကဲ့သို့သောစွမ်းရည်ရှိသောခွေးတစ်ကောင်သည်အတွေ့အကြုံရှိသောပိုင်ရှင်၏လက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျအပြာရောင် Heelers ဗဟုသုတရှိပြီးတက်ကြွသောခေါင်းဆောင်များဖြင့်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးပါစေ။
ပိုင်ရှင်ကသင်ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်လား သင်နှင့် Texas Heeler တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ပြီးပြည့်စုံသောပွဲဖြစ်သည်ကိုမှတ်ချက်များတွင်ပြောပြပါ။
ဂျာမန်သိုးထိန်းရွှေ retriever ရောနှော